FX-taliyahaada – Sida loo ganacsiga Suuqyada Financial
1. Hab ganacsiga ee Suuqyada lacageed
2. Jimicsiga: sida loo Dhig First isbedel hit a
3. Waa Maxay Faafiye?
4. Maxa ku qaado Faa'iido?
5. Waa maxay Stop Loss?
6. qiimaynta Muhiimka ah sharaxay (Batroolka ceyriin)
7. Falanqaynta Muhiimka ah lagu qeexay (Apple)
8. falanqaynta Technical: sal-dhigida
9. 3 tilmaamaha Golden ee kala iibsanayo iyo
10. Maxaad ganacsatada khabiir Ha Isticmaal mobile Libertex?
Dad badan ayaa u malaynayaa aad u baahan tahay in ay Dhaxalka lacageed xirfadle ama mid ka mid million, anagana in midba gudaha suuqa dhaqaalaha, si kastaba ha ahaatee, waa in xaqiiqada ma dhab ah.
Tuulmooyin burbur ah aadanaha oo ku ganacsan lacag qalaad maalin kasta laakiin ugu badnaan ma ka fiirso wixii ay ku jiraan xaqiiqada samaynaya.
Hubi in aad ku gatay waxaan ahay Forex hore ka badan ka socda fasax ah, waxaana suurto gal on garoonka via waab ganacsiga lacagta. aad bixisey lahaa lacag caddaan ah qaar ka mid ah ka mid ah Forex oo helay lacag caddaan ah ee kale qaar ka mid ah. Waxa aad heshay dib ugu beddeleen aasaasay dul qiimaha raanta waqtiga.
Aynu fileynaa in waqti isku mid ah sidii aad ahaayeen fasax, ayaa news in lacagta shaqola'aanta gudaha Maraykanka ayaa hoos u dhacay iyo Maraykanka lacag greenback ayaa ku tarmay by shan%. inta aad ku soo laabtay guriga, aad bedelay dollars America dhabarka hoose si ay lacag ajnabi aad u dhow oo ogaaday in aad ka dhigay a 5% dakhliga.
Maxaa maray off? In la eego fudud kaaga dhigay Xirfado: hoose inta aad iibsaday greenbacks US, labaad marka aad iyagii ka iibiyey iyo sameeyey 5% faa'iido.
iibsada Expert dhigi xirfadaha u dhigma, laakiin, Hunguriyeeyn Darteed gobolka qaadanaya ah meel iibka sarifka lacagaha qalaad ee maddaarka, waxay qaadan meel marayo fududahay si aad u codsato Libertex madal online, on telefoonada gacanta, kaabsoosha oo computer ee. maal intaa la ogaado siyaabaha ay u filayaan guuro qiimaha, on habka ay u helaan lacag on aasaaska joogto ah.
Aynu wada aragno sida aad kasban kartaa adigoo isticmaalaya iibsanayo iyo suuqyada maaliyadeed.
All laga yaabaa in aad u baahan tahay shan daqiiqo waxaa ka mid ah u dhigi, account demo la a $5,000, iyo laba lacag qalaad lammaane, EUR / USD iyo USD / CHF.
labo-labo waxay tusaalooyin ku habboon sida xigashooyin ay beddelid kala duwan ilaa xad si joogto ah, iyo faa'iido ah waxaad samayn kartaa iyaga ka ee kaliya 5 si ay u 30 daqiiqo. Waa in aan la sugi lahaa inuu ka soo laabto dalxiiska.
ee ogolaadaa Iska bilaabay!
1. Dooro EUR / USD liiska hantida iyo furi beddelka iibsi. oggolaadaan ee maal $500 la jiray boqol multiplier a sida tusaale ahaan ah.
2. Fur ganacsiga kale la USD / CHF sida hanti, isticmaalaan badan waxa isku mid ah iyo cadadka maal isku mid.
Waayo, is-dhaafsiga kasta, lacag Yeeshay doonista lacag yar (gudaha jidka loo siman yahay in hay'ad maaliyadeed laga yaabaa in qiimaha lacagta for Forex a). Waxaad arki kartaa qiimaha this uu furmo suuqa sarrifka. laakiin in la barbardhigo hay'ad maaliyadeed, guddiyada dealer badan hoos u dhac.
3. Sida ugu dhakhsaha badan labada Xirfado furan yihiin, Weeraryahanka shan daqiiqo fiiri xitaa sida raadinaya natiijada dhamaadka aad Xirfado '.
afar. Iyadoo isbedel ugu horeysay ka faa'iido badan yahay labaad mid ka mid ah khasaaraha ganacsiga, ama xirfadaha kasta waa lacag caddaan ah, labada xiro in aad xirtid, waayo dakhligaaga.
Marka aad labada Xirfado kala furi jireen sidii sharxay halkan iyo si kastaba ha ahaatee ma arki kartaa wax kasta oo dakhliga ku soo gala, ha ka welwelin. Haddii suuqa waa xawaal, ma aad arki doonaa kale ah a, sidaas tago furo markii qaar ka mid ah.
In naga kiiska, dakhliga USD / CHF ka badan EUR / USD khasaaraha. oggolaadaan ee u dhow labada Xirfado si aad u hesho qaar ka mid ah dakhliga on account ka.
Waxaan kaliya dakhliga on USD / CHF ee kaliya daqiiqo qaar ka mid ah, oo aan la isticmaalayo qiimayn sinaba.
Faafiye A waa mid ka mid ah qalabka aasaasiga ah ee Libertex. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad in kobaca awoodda faa'iido aad sarrifka ee.
Sidee u farshaxankiisa? Waa wax iska sahlan.
La oggalaado ee filan oo aad ka iibsan EUR / USD, tiro maalgashiga yahay $50, iyo multiplier waa mid ka mid. Haddii lacag la soconnaa 10%, dakhligaaga uu noqon karaa $ shan ($50 x 10%).
Laakiin haddii sida soo horjeeda ka mid ah waxaad cayimi 20 sida multiplier a xaddiga maal aad kici doonaa $1,000 ($50× 20).
Sida aad arki karin, dakhliga ku soo gala ayaa la Qolol marayo 20, iyo in uu yahay sida shuqullada multiplier.
Taasi waa sida xawaaraha ah ee gaari a: ayaa in ka badan waxaa fog, si degdeg ah aad gaadho meesha aad u socoto. Si kastaba ha ahaatee, xawaaraha sare keentaa fursad weyn leh. Tani waa sababta ay mid kastaba xoog sabab gaari doorto xawaaro waxa wanaagsan naftooda ku xiran ay ka dheregno, xaalad dabaqa waddooyinka iyo code martida goobta.
Waayo, ganacsatada laylis, waxaan ku talinaynaa isticmaalka of multiplier a yar, taas oo u dhiganta 1, kaas oo looga fogaado doonaa khataraha ay dhacdo in falalka suuqa idiin.
Sida aad iibsaday awoodaha iyo waayo-aragnimo, waxaad sidoo kale kordhin kartaa multiplier.
Qaado dakhliga waa amar la sugayo in si toos ah sidhab-in faa'iido dealer ah.
halka in la isticmaalo dakhliga Qaado:
• Halkaan hoose ka fiirso waxaad u baahan tahay in ay iska tagaan ganacsiga furi a dhowr saacadood oo aan la joogto ah la socodka dhaqdhaqaaqa kartaa amarka. Xaaladdan oo kale, laakiinse hubaal waa inaad meel si dakhliga Qaado a iyo nasasho ku kalsoon halka aad madaxa off si ay u dhawraan filim.
• Aan aaminsanahay in waqti isku mid ah inta aad daawanayso movie guuro lacag hanti ee hab wanaagsan. A si dakhliga Qaado oo ku yaalla hore quful-on doonaa faa'iido via mashiin haray aad shaqo, mar hanti gaadhaysa lacag fiican, si aad u dhigi dakhliga ah xataa sida aad daawato aad film.
halkan waa tusaale ka mid ah sida ay u meel si Qaado faa'iido ah:
• Waxaad la furo isbedel iibsan EUR / USD a at 1.0620
• Waxaad maal $500 la multiplier a of 100
• hubi shaxda for heerka hantida ee ugu sarreysa hadda. In naga kiiska, waxaa 1.0745.
• Your dakhliga Qaado si u baahan tahay in la taagan yahay oo kaliya hoose heerka ugu badnaan, qiyaastii 1.0725
• Si aad meel ah si dakhliga Qaado for xigasho this, marka hore furi ganacsiga ah la hantida ka dibna si My Trades tago
• Soo qaado baxay sarrifka / EUR USD ee aad imika uun la furay iyo riix waxa ku saabsan
• Dooro Quote ka Loss joogsiga / Qaado dakhliga menu
• In ay ku xiran dakhliga Qaado, dhigay lacag aad rabtay, 1.0725 in our kiiska, oo guji on dukaanka
Hadda waxaad samayn aan waajib ahayn in ay ka wel ku saabsan hagaajin lacag hantida ee mana yeelan doonaan in ay qaataan saacadood raad gooldhalinta aad. Inkastoo aad goolka stage dakhliga ayaa lagu gaaray, aad ganacsiga si toos doono dhow, iyo dakhliga la si toos ah keydin karaa in account ganacsi aad.
Stop-Loss waa amar ilaa ay isticmaalaan ganacsatada si loo yareeyo khatarta.
Marka la falanqeeyo suuqa, iibsada ayaa sidoo kale khalad u tarjumid laga yaabaa in dhaqdhaqaaqa qiimaha hantida iyo daran Beentoodii khasaare. Si loo yareeyo tirada khasaaraha ka iman kara, dealer a kartaa xadka fursad gaar ah ugu horayn ku salaysan seenyo suuqa.
Tani waxay ka ilaaliya aad haysan si ay u muujiyaan gooldhalinta for dura sii dheerayn waqtiga ku riday laga yaabaa in off faahfaahsan dareenka halka samaynta doorashooyin ganacsi oo muhiim ah. A si looga hortago-Loss sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad tagto screen madaxa iyo daawato filim la ogaada-sida tirada halista waxaa u saftay.
Xuquuqda halkan waa tusaale ka mid ah si ay u dhow si looga hortago-Loss a:
• Waxaad la furo isbedel iibsiga EUR / USD a at 1.0605
• Waxaad samayn maalgelin $500 la multiplier a boqol nin
• Si aad u dhigo si looga hortagi-Loss si sax ah, eegno shaxda lacag hoos u dhac hadda ugu badan hantida ee. ay helaan lacag ka yar.
• aad si stop-Loss waa in la si fudud u taagan heerka ugu yar ay dureeri, at ah oo ku saabsan 1.0580
• Si aad u dhow si stop-Loss ah quote this, marka hore furi ganacsiga ah la hantida ka dib markii taas booqo Trades My
• Soo qaado ganacsiga EUR / USD ee aad imika uun la furay iyo riix waxa ku saabsan
• Soo qaado baxay Quote ka Loss ah looga hortago / Qaado dakhliga menu
• Inside maado Loss hortago ah, dhigay qiimaha aad doonayso inaad, 1.0580 in our kiiska, oo guji on dukaanka
Hadda ma aha in aad ka cabsataan oo ku saabsan hagaajin Heerka hantida ee mana yeelan doonaan in ay qaataan saacadood raad gooldhalinta aad. khatarta waa la xisaabinayaa iyo la daryeelo.
Falanqaynta Fundamental Explained
ajuurada Ceyriin si joogto ah diinta, waxay saamayn ku leh gargaarka ee doorashooyinka OPEC, colaadaha dhexe East, oo kordhiyey wax soo saarka ee Iran oo badan oo qaybaha kala duwan.
Tusaale ahaan, ha qaadan warbixin lagu daabacay January 2016: Russia iyo OPEC si loo yareeyo Down saarka Batroolka Ceyriin oo si looga hortago ku-off kor.
on February 16, 2016, OPEC iyo Russia runtii ku guulaysteen in ay wax soo saarka guud keydsho.
on February 17, lacag saliidda cayriin ka booday $32.29 si ay u $34.31 (6.saddex%). Waayo, ku xiga 20 maalmood, amarka ku kaydsan sii kordhaya, iyo March 7, ay gaartay $ 40.seventy lix, riixdaan a sii weynayd ee 26.2%.
Jebinta news oo ay ku jiraan ogeysiisyada muhiimka ah iyo heshiisyada muujiyaan ilaa maalin kasta. suurto gal u daawado telefishanka ama on-line. dhacdooyinka lacag noocan oo kale ah lagu soo muuqday laga yaabaa in sida qaylodhaan ganacsiga; via iyaga reading, aad saadaalin karaa in heerka uu noqon doono ku riixdaan sii weynaydba ama dayrta.
Samaynta Xirfado via habkan waxaa caadi loo yaqaan qiimaynta asaasiga ah.
munaasabadda A dheer la filayay, sida loo sii daayo a of brand a iPhone cusub, iPad, ama MacBook, awoodo safaf dhaa-dheer ujeedada dukaamada. baahida Tani, markeeda, laga yaabaa in wixii intaa leeyihiin saamayn on a riix sii weynaydba riwaayado amarka kaydka Apple gudahood.
Tani waxay ku siinaysaa fursad ah dakhliga cajiib ah wixii ka ganacsada hit a.
Aynu qaadan tusaale ahaan ah. on September 7, 2016, iPhone cusub 7 beddeleen siiyo dadweynaha guud.
The maalin aad loo siman yahay, saamiyada Apple ka kacay $107 ilaa $ boqol iyo shan iyo toban.
Dhacdadani waxa ay beddeleen ka mid ah dhammaan macluumaadka portals, sidaas oo dhan oo naga mid ah (u badan tahay, aad oo ay ku jirto) ayaa loo arkaa karin ku saabsan.
qaybo ka mid ah macluumaadka ku saabsan saarayaasha ugu caansan, alaabta iyo adeegyada (facebook, Microsoft, Google, Tesla, iyo wixii la mid ah.) waxaa bilaabay maalin kasta, on-line iyo telefishinka. Mid kasta oo ka mid ah hawlaha waa calaamad ganacsi in aynu aad u ah inay dakhliga heerka koowaad.
Trades ugu horrayn ku salaysan news iyo jeer waxaa caadi ahaan loo yaqaan falanqaynta asaasiga ah, mid ka mid ah farsamooyinka kala iibsanayo iyo ugu caansan.
Si aad u qaadato gadashada aqoon iyo doorashada iibinta, taas oo ka mid ah in la iibiyo ama iibsado hanti, aad u baahan tahay si ay u baaraan kharashyada suuqa. On gargaarkiinna, Qiimaha kuwa visualized gudaha qaab gooldhalinta.
Haddii aad ku dhagraan ah shaxda heerkulka atmosfeerta in 2 dhibcood tobanle, aad si fudud u arki kartaa xilliyada halka heerkulka xoog badan, i.e. halka u fadhin in kala duwan oo hufan ka mid ah xilli ka dibna kor u soo maratay xagaaga iyo hoos u jiilaalka.
Maxaa ku dhacay gudahood ka baxsan xataa tusi doonaa in aayaha - ayaa waxa uu yahay sidii ay khuseyso in heerkulka sida ay tahay in ay suuqyada dhaqaalaha. Taasi waa in xaqiiqada nuxurka qiimaynta farsamo.
La oggalaado ayaa mid ka mid ah qalabka ugu caansan qiimaynta casriga qaado, taageero iyo Resistance, tusaale.
Marka qiimaha loo fuulaana oo si lama filaan ah dumiso Jidka, sida haddii garaacid derbi, waxa la joogaa wakhtigii si kor loogu qaado.
Marka heerka uu hoos u dhaco ka dibna dhan hal mar bounces kor, sida kubbad oo kale bounces off ilaa dabaqa, waa signal aad u fiican oo madax dheer.
isticmaalka our madal ganacsiga, aad ku dhagraan yaabaa khadadka dheeraad ah oo ku saabsan shaxano in la garaaco dul reversals, ama isticmaal tilmaamayaasha in la siiyo oo aad ka iibsan iyo kor signalada.
Si aad u hufan oo si ammaan ah u beddeli, si fudud u raac tilmaamaha saddex Golden!
Si joogto ah u isticmaali gadashada fashion iyo iibinta. xisaabta ugaga galay: fashion waa saaxiibkaa! haddii aad arki lacagta la si fudud u dhaqaaqin in koorsada wanaagsan, ganacsan sidan. Waxaa caadi ahaan ka fudud in uu ordo, oo dabayshii!
U ogolow faa'iidada aad u koraan, xataa sida proscribing khasaare aad. Dakhligaaga u baahan in ka badan khasaare aad, waxaa fudud in! waxa ilaa hadda la mid ah in jiritaanka dhabta ah: kasban dheeraad ah, qaataan badan ka yar. Your hanjabaad / ratio ammaantaada u baahan tahay inaad 1:2... ama ka badan!
xaq halkan ka 1/3 sharci: xakamayso lacag. halka aad hadda bilaabay in la beddelo, isticmaali tiro maalgashiga iyo laablaabi, sidaa darteed ma laga yaabaa in aad halis badan 2% aad baaqiga. sidan, beddelka ah guuleysan noqon kartaa ka raqiisan tigidhka qiimaha bas.
In gargaarkiinna, waxaana waxaad fartaan Wannaagga Tracker dealer, qalab aad u heli karaa inuu kaa caawiyo inaad ku eekaan qodobadaan halka aad samaynayso tallaabooyinka u horeeya ee sida ganacsade ah.
Tag on daawashada tilmaamaha si aan u ogaado siyaabaha ay u ganacsadaan socda xeerarka kuwa!
Si aad si guul leh ku ganacsan, aad rabto in aad si aad u wanaagsan baari suuqyada iyo si degdeg ah uga jawaab si qaylodhaan ay tahay diraya hab. The terminal internet Libertex kaa caawin doonaa qiimeynta, xataa sida cell Libertex ku App hubineysaa in aadan ka tegid doonaan fursad ganacsi kasta. In ka badan siddeetan% ka mid ah maal-guul isticmaali kasta Libertex terminal internet iyo Libertex app ee mobile.
Isku day in aad ka fekeri gobolka ku xiga ee arrimaha: aad si fiican u ordi falanqaynta suuqa ku jira terminal Libertex ee saafiga ah iyo goostay inaan furo ganacsi, laakiin markaas waxaad definately lahaa in ay tagaan miiska iyo la siiyey qabtay a martida jam, ama laga yaabee in aad u tageen inay iskufilka filim ama tageen inay soo booqdaan kumuunayaasha a. By isticmaalaya isticmaalaya Libertex app gacanta aad si degdeg ah jawaab uga yaabaa inay u dhaqaaqdo oo dhan Heerka waqti isku mid ah sida isagoo jidka fog dheer ka desktop, i.e. aad midba kara go ah, mar walba, meel kasta oo. Iyada oo Libertex app ee mobile, aad edit karaa jagooyinka u furan, iyo sidoo kale u furan xirfadaha cusub oo ay ula socdaan saamaynta aad ee waqtiga dhabta ah. Taasi waa si gaar ah faa'iido leh halka guud ahaanba xaaladda suuqa horeba waa idiin nadiifsan.
Inkasta oo aad rabto in aad wakhti ku falanqayn ku qaataan, samaynta doorashada muhiimka ah, ah Libertex terminal net waa xal dhab ahaantii kaamil ah. Iyada oo kala iibsanayo iyo madal this, aad la siiyay wax walba oo aad rabto in aad gacanta: ratings hantida, qalabka falanqaynta farsamo, iyo macluumaad kala jejebintii. Sidoo kale, our shabaqa ku salaysan gebi madal u fasaxaya inaad makaniyay aragti dib u eegista khubaro our 'iyo talo ka hor inta aanad la furo sarrifka a.
Download our app gacanta ilaa Suuqa Andriod ama AppStore ah, iyo isticmaali madal web naga via browser aad ugu jeceshahay.